गणेश - विकिपिडिया
(भगवान गणेश बाट पठाईएको)
गणेश भगवानको मुर्ति
विघ्न हर्ता गणेशा
घर कैलाश पर्वत
हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले सबैभन्दा पहिले पूजा गर्ने देवताको नाम गणेश हो । हात्तीको शिर तथा मान्छेको जस्तो शरीर भएका ठूलो भूँडीवाल भगवान गणेशलाई विघ्न हर्ता तथा सिद्धि दिने सिद्धि विनायक भनेर पूजा गरिन्छ। ऋद्धि र सिद्धि यीनका श्रीमती हुन्। नेपाल तथा भारतमा धेरै मानिसहरूको नाम गणेश राखिएको हुन्छ। शिवमहापुराणमा गणेशको नामबाट परिचित भगवान गणेशको जांतहुने,पुजागर्ने तिथि ,मिति ,बिधि ,बिधानमा एकरुपता छ । तर नेपालको सूदुरपश्चिम डोटी क्षेत्रमा गणेश भगवानलाई फरक नामले पनि चिन्ने गरिन्छ । जस्तै:-
डोटी बोगटानमा धिरगाणी (गणेश) भनिन्छ ।
डडेल्धुरामा गन्याप लाटो (बडालको लाटो देवता) भनिन्छ ।
दार्चुलामा लटिनाथ /लट्बाव (गणेश ) भनिन्छ ।
गणेश शब्दको उत्पत्ति गण+ईश मिलेर भएको हो । जसको अर्थ हुन्छ गण हरूका देवता । शिवगणका प्रमुख गण नन्दी मानिएका छन् । नन्दी सहित सवै गणहरूका देवता चाहीँ गणेश मानिन्छन् ।
१ गणेशको रूपले के बुझाउछ ?
२ भगवान श्री गणेशको जन्म
३ प्रथम पूजा
४ नेपालका प्रमुख गणेश मन्दिरहरू
४.१ काठमाडौँ उपत्यका
५ गणेश शब्दसँग सम्बन्धित बिषयहरू
६ चित्र ग्यालरी
७ सन्दर्भ सामग्री
७.१ यो पनि हेर्नुहोस
८ बाह्य लिङ्कहरू
गणेशको रूपले के बुझाउछ ?[सम्पादन गर्ने]
भगवान श्री गणेशको रूपमा भिन्नता रहेको छ। यो भिन्नताले आफ्नो-आफ्नो छुट्टा छुट्टै महत्त्व देखाउँछ। भगवान श्री गणेशको पूजा सबै देवताहरू भन्दा पहिले हुन्छ। काममा कुनै बिध्न बाधा उत्पन्न न होस् भनेर कुनै पनि काम थालनी गर्नु भन्दा पहिले सबैले भगवान श्री गणेशको आरधना र स्मरण गर्दछन्। यहाँ भगवान श्री गणेशको रूपले के भन्दै छ ? भन्ने बारेमा टिप्पणी गरिंदै छ।
भगवान श्री गणेशको शिर हात्तीको छ। हात्तिलाई संसारको सबै भन्दा ठूलो थल चर प्राणिको रूपमा लिइन्छ। कुनै मान्छेले कुनै काम गर्दा समाजमा आफ्नो शिर ठाडो रहोस् आफुले समाजमा शिर झुकाउनु न परोस् भन्ने सोच सबैको हुन्छ। भगवान श्री गणेशको शिरले कसैले पनि जो सुकै कामको थालनी गर तर समाजमा शिर झुक्ने काम न होस् भन्ने बुझाउछ। यसैले हामीहरूले कुनै पनि कामको थालनीमा भगवान श्री गणेशको हात्तिको शिरको स्मरण गरी समाजमा शिर ठाडो रहोस् समाजको अगाडि शिर न झुकोस् भन्ने शिक्षा पाउनु पर्छ। जिव विज्ञानका अनुसार हात्ती ठूलो प्रणी भए पनि यसले अरु सबै चिजहरू आफू भन्दा ठूलो देख्द छ। यसैले गणेश भगवानको हात्तीको शिरले के पनि बुझाउँछ भने संसारमा कुनै पनि जिव छ त्यसलाई आफू भन्दा ठूलो मान भन्ने भावना राख्नु पर्द छ।
भगवान श्री गणेशका कानहरू ठुला छन्। मानिसले कुनै पनि कामको थालनी गर्दा सबैको कुरा सुन्नु पर्ने र बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सबैको कुराहरू ध्यान दिएर सुन्यो भने त्यो मान्छेलाई कुनै पनि कामको सुरु देखि अन्त सम्म कुनै बिध्न बाधाहरू पर्दैन। कामको पनि फतेह हुन्छ। अरुसँग न सोधेर अरुको कुरालाई न गनेर आफ्नो मन मर्जी गर्ने मान्छे कहिल्यै पनि सफल हुन सक्दैन। कसैले आफ्नो बारेमा नराम्रो भन्यो पनि त्यो सुन्नको लागि ठूलो कानको आवश्यक पर्दछ। यसैले हामीले कुनै पनि कामको थालनिमा भगवान श्री गणेशका ठुला कानहरूलाई स्मरण गरी हामी जो काम गर्न गैरहेका छौँ त्यसमा अरुको राम्रो कुरालाई सुनेर व्यवहारमा ल्याउने। नराम्रो कुराहरू कानले पचाउनु पर्छ भन्ने शिक्षा पाउनु पर्ने हुन्छ। 
भगवान श्री गणेशको नाक लामो छ। हाम्रो समाजमा कसैले केही नराम्रो काम गरेमा त्यसलाई सबैले "यो मानिसले त नाक कटायो" भन्छन् । मान्छेले कुनै पनि काम आफ्नो लाज (इज्जत) बचाएर गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि समाजमा इज्जत बचाउने काम गरेन आफ्नु इज्जत फाल्यो भने सबैले नाक कटुवा भन्ने गर्छन् ।। यसैले हामीले कुनै पनि कामको थालनीमा भगवान श्री गणेशको लामो नाकको स्मरण गरेर हामी जुन काम गर्न गैरहेका छौँ त्यसमा हाम्र नाक नकाटियोस्। हाम्रो इज्जत बचोस् भन्ने शिक्षा पाउनु पर्ने हुन्छ।
भगवान श्री गणेशको पेट ठूलो छ। मान्छेले कुनै पनि कामको थालनी गर्दा अरुले रिश पनि गर्न सक्छन्, भए नभएका कुराहरू भन्न सक्छन्, राम्रा नराम्रा कुरा सुन्नु पर्ने हुन्छ। यि सबै कुराहरूलाई पचाउनु पर्ने हुन्छ। राम्रा कुराहरूलाई मन भित्र केन्द्रित गर्नु पर्छ र न राम्रा कुराहरूलाई पचाउनु पर्ने हुन्छ। पचाउनको लागि ठूलो पेट बनाउनु पर्ने हुन्छ।यदि कसैले केही भन्यो भन्यो भन्दैमा झगडा गर्न लाग्यो भने आफ्नो काममा बाधा उत्पन्न हुन्छ।यस कारण हामीले कुनै पनि कामको थालनी गर्दा भगवान गणेशजीको ठूलो पेटलाई स्मरण गरेर हामीमा कुनै पनि विवादलाई पचाउन सक्नु पर्छ भन्ने शिक्षा पाउनु पर्ने हुन्छ।
भगवान श्री गणेशका चार वटा हातहरू छन्। ति हातहरूमा क्रमशः बन्चरो, लड्डु, बर मुद्रा र फूल रहेका छन्। जो दया, दण्ड, कोमलता र मिठासको प्रतिकहरू मानिन्छन्। मान्छेले कुनै पनि कामको थालनी गर्दा उक्त कार्यमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।
भगवान श्री गणेशको बाहन छुचुन्द्रो मुसा हो। छुचुन्द्रो सानो भए पनि चलाख प्राणीको रूपमा तुलना गरिन्छ । भनिन्छ मुसाले नै अन्नहरूको बिउ समुन्द्र पारीवाट ल्याएको हो। हामीहरूले कुनै पनि कामको थालनी गर्दा भगवान श्री गणेशको रूप र वाहन मुसाबाट चलाख या बुद्धिमान छ भने आफू भन्दा सानो प्राणिको पनि सहायता लिएर आफ्नो काम पुरा गर्नु पर्छ भन्ने धारणा राख्नु पर्द छ।
भगवान श्री गणेशको जन्म[सम्पादन गर्ने]
भगवान श्री गणेशका बाबु शंकर र आमा पार्वतीलाई भनिएको छ। पौराणिक कालमा पार्वतीले शिवजीको शरीरको मयल (जो खरानी घसेर जम्मा भएको थियो) एकत्र गरिन्। भगवान शिव जी बाहिर गएको बेला माता पार्वतीले त्यही मयलको बालक बनाएर ढोकाम राखि आफू भित्र बसिन्। यो काम उनले भगवान शिव जीलाई छकाउनको लागि गरेकी हुन्। तर माता आद्य शक्तिको हातबाट बनेकाले ति बालक जिवित भएर द्वार पालेको काम गर्न लागे बाहिरबाट कोही पनि आएमा भित्र प्रवेस गर्न न दिने भए। यो थाहा पाएर नन्दिश्वरादी शिवका गणहरू आएर ति बालकसँग लडे तर कसैले पनि लड्न सकेन अन्तमा भगवान शिव स्वयम गएर लडे शिवले पनि बडा मुस्किलले आफ्नो त्रिशूलले बालको टाउको काटेर अलग गरी भित्र प्रवेस गरे। भित्र गएर माता पार्वती सँग भने "आज तिमीले ढोकामा कसलाई राखेकी थियौ त्यसले मलाई भित्र आउन नै दिएन बडो मुस्किलले मारेर आएँ ।" यसो सुनेर माता पार्वति त्यो त मेरो पुत्र हो तपाईँले त्यसलाई मारी दिनु भयो भनि रुन लागिन्। यो देखेर भगवान शिवलाई पनि दु:ख लाग्यो उनले भगवान बिष्णुलाई भने "मैले बालकको टाउँको फुटाली दिएँ अब त्यो टाउको काम लाग्दैन तपाईँ गएर कुनै पनि प्राणीको टाउको ल्याएर आउँनुहोस् बालकलाई जिवित गर्नु पर्छ" यो सुनेर भगवान विष्णु बाहिर गई हात्तिको टाउको ल्याएर आए। त्यो टाउको काटिएको हात्तीलाई पनि गँगटोको रूपमा अर्को प्राणी बनाए। त्यही हात्तीको टाउको लगाएर बालकलाई जिवित गरियो पछि गएर उनको नाम गणेश राखियो ।
प्रथम पूजा[सम्पादन गर्ने]
एक पटक देवताहरूमा कसको पूजा पहिले गरिनु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल चल्यो । देवताहरूका परम पिताम्मह ब्रह्माजीले जो पुरा ब्रह्माण्डको परिक्रमा गरेर पहिले स्वर्गमा पुग्छ त्यसको पूजा पहिले हुनेछ भन्ने निर्णय सुनाए । ब्रह्माजीको निर्णय सुनेर इन्द्र, वरुण, कुबेर आदी देवताहरू आफ्नो आफ्नो बाहनहरूमा बसेर ब्रह्माण्ड परिक्रमाको लागि निस्किए । भारी जिउ र त्यसमाथी मुसा बाहन भएका गणेश नत दौडेर देवताहरूलाई जित्न सक्थे नत मुसाले नै बोकेर गणेशलाई परिक्रमाको वाजी जिताउन सक्थ्यो । गणेश निकै चलाख र ज्ञानी देवता मानिन्छन् । त्यो वाजी जित्ने गणेशले एक दृढ विचार बनाए । उनी ब्रह्माण्ड परिक्रमामा नगएर कैलाश पर्वत आफ्नी माता पार्वती भएको ठाउँमा गए । माता पार्वतीलाई बाबु शिव भएको ठाउँमा गएर बस्न आग्रह गर्न थाले । गणेशको कुरा सुनेर पार्वतीजी शिवको छेउमा गएर बसिन् । यसरी आमा बाबु दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेर सात पटक परिक्रमा गरेर ब्रह्माजी भएको ठाउँमा गए । ब्रह्माजीले गणेशले के गर्छन् भन्ने कुरा सबै हेरेका थिए । आमा बाबु भन्दा ठुलो यो ब्रमाण्ड छैन । ब्रह्माणड भन्दा पनि ठुला आमा बाबु हुन् भन्ने कुरा सिद्ध गरेर देखाएकाले ब्रह्माजी गणेशबाट निकै खुसी भएर उनलाई देवताहरूमा सबै भन्दा पहिले पूजिने देवता भनेर छनौट गरे ।
नेपालका प्रमुख गणेश मन्दिरहरू[सम्पादन गर्ने]
काठमाडौँ उपत्यका[सम्पादन गर्ने]
चार गणेशस्थान सूर्य विनायक, कार्य विनायक, जल विनायक, अशोक विनायक
कमलादी गणेश मन्दिर
गणेश शब्दसँग सम्बन्धित बिषयहरू[सम्पादन गर्ने]
गणेश शव्दले धेरैवटा अर्थ बोकेको हुन्छन्:
गणेश लेखनमा सिद्धहस्त मानिएका छन्। त्यसैले कसैले धेरै राम्रोसित र तीब्र गतिमा लेख्न सक्छ भने उसलाई गणेश उपमा दिइन्छ।
गणेश शब्दले चाकडी तथा चाप्लुसी भन्ने पनि जनाउँछ।
गोवरगणेश भन्नाले चैं केही पनि नजान्ने बुद्धु भन्ने बुझिन्छ।
श्रीगणेश शव्दले भनें कुनै पनि कुराको शुरूवात भन्ने जनाउँछ।
चित्र ग्यालरी[सम्पादन गर्ने]
Gallery of free to use images
↑ १.० १.१ १.२ १.३ स्कन्ध पुराण
हिन्दु देवताहरू तथा शास्त्रहरू
वैष्णव: · विष्णु पुराण · मत्स्य पुराण · भागवत पुराण · गरुड पुराण · कूर्म पुराण · वाराह पुराण
शैव: · स्कन्द पुराण · वायु पुराण · अग्नि पुराण · लिङ्ग पुराण · नारद पुराण · पद्म पुराण ब्रह्मा: · ब्रह्म पुराण · ब्रह्माण्ड पुराण · ब्रह्म वैवर्त पुराण · मार्कण्डेय पुराण · भविष्य पुराण · वामन पुराण
ईशोपनिषद · ऐतरेयोपनिषद · कठोपनिषद · केनोपनिषद · छान्दोग्योपनिषद · प्रश्नोपनिषद · तैत्तिरीयोपनिषद · बृहदारण्यकोपनिषद · माण्डुक्योपनिषद · मुण्डकोपनिषद · श्वेताश्वतरोपनिषद · कौषीतक्युपनिषद · मैत्रायणण्युपनिषद · (१०८ :उपनिषदहरू)
· रामायण · महाभारत · श्रीमद्‍भगवद्गीता · मनुस्मृति · धर्मसूत्र · गृह्यसूत्र · योगसूत्र · आगम · धर्मशास्त्र
हिन्दु पौराणिक कथा
विकिमिडिया कमन्समा Ganesha सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=गणेश&oldid=889211" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १३:४५, ३१ अगस्ट २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।